China Pipe mveliso kunye nabenzi | Honghua
Ikholam yentsimbi yentsimbi yenziwe ikakhulu ngombhobho wesinyithi ongenamthungo kunye nezinye iiprofayili. Izinto eziphathekayo zamkela i-Q235B kunye ne-Q345B. Ikholamu yombhobho yentsimbi ihlala isetyenziselwa umbhobho omkhulu kuphahla lweholo enkulu yezemidlalo, ibhasi yentsimbi okanye isikhululo sikaloliwe.
Ikholam yentsimbi yentsimbi ubukhulu becala yenziwe ngentsimbi engenamthungo umbhobho kunye nezinye iiprofayili. Izinto eziphathekayo zamkela i-Q235B kunye ne-Q345B. Inkqubo ye- iwelding esemgangathweni umbhobho ikholamu ingqongqo kakhulu, kunye ne welds ngesiqhelo weld epheleleyo yokungena. Umgangatho we weldsgrade-Singakwazi ukuhlangana kunye nokudibanisa zonke iintlobo ikholamu yombhobho eneentlobo ezahlukeneyo zedayimitha yangaphandle, ngaphakathi ngaphakathi kunye nobukhulu bodonga. Iprofayile yecandelo intle kakhulu. Ikholamu yombhobho yentsimbi ihlala isetyenziselwa umbhobho omkhulu kuphahla lweholo enkulu yezemidlalo, ibhasi yentsimbi okanye isikhululo sikaloliwe.
Egqithileyo Umbhobho wombhobho
Okulandelayo: H-ezimilise truss welding
Ikholam yentsimbi eyenziwe ngebhokisi
Ikholam yomnqamlezo yoLwakhiwo oluPhakamileyo
Imiqadi yentsimbi kunye neentsika
Ikholam yentsimbi kunye ne-Beam
Ukwakhiwa kweKholamu yentsimbi
Ikholamu yentsimbi yokuqengqeleka i-roller coaster
Ikholam yentsimbi yentsimbi
IHolo yezeMidlalo yentsimbi